Fangatahana hacking sy fiarovana 11 tsara indrindra ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Linux no rafitra mpijirika mpiorina tsara indrindra. Izany dia tsy noho izy "sarotra" hampiasaina fa noho ny habetsaky ny hacking sy ny fitaovana fiarovana namboarina ho an'ity rafitra ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra ihany no tanisainay.
1. John the Ripper: fitaovana fanapahana teny miafina. Izy io dia iray amin'ireo fanta-daza sy malaza indrindra (misy kinova Windows ihany koa io). Ho fanampin'ny autodetecting ny tenimiafin'ny tenimiafina dia azonao atao ny manamboatra azy araka izay tianao. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny teny miafina voahidy ho an'ny Unix (DES, MD5 na Blowfish), Kerberos AFS ary Windows. Izy io dia manana modules fanampiny hanisy hashes tenimiafina voahidy MD4 ary tehirizina ao LDAP, MySQL sy ny hafa.
2. Nmap: Iza no tsy mahalala Nmap? Tsy misy isalasalana, ny programa tsara indrindra ho an'ny fiarovana ny tambajotra. Azonao atao ny mampiasa azy io hahitana solosaina sy serivisy amin'ny tamba-jotra. Ampiasaina amin'ny scanning port ity, fa ity dia iray monja amin'ny fahafahany manao izany. Izy io koa dia afaka mahita serivisy tsy mandeha amin'ny tambajotra ary koa manome antsipiriany momba ny solosaina hita (rafitra miasa, fotoana nifandraisany, lozisialy ampiasaina hanatanterahana serivisy, fisian'ny firewall na koa marika an'ny karatra tambajotra lavitra). Izy io dia miasa amin'ny Windows sy Mac OS X koa.
3. Nessus: fitaovana hahitana sy hamakafaka ny fahalemen'ny rindrambaiko, toy ireo izay azo ampiasaina hifehezana na hahazoana angona amin'ny solosaina lavitra. Izy io koa dia mahita ny tenimiafinao default, patch tsy napetraka, sns.
4. chkrootkit: Amin'ny ankapobeny dia script shell izy io mba ahafahana mahita rootkit apetraka ao amin'ny rafitray. Ny olana dia rootkit maro ankehitriny no mahatsikaritra ny fisian'ny programa toa izao mba tsy ho hita.
5. Wireshark: Packet sniffer, ampiasaina handinihana ny fivezivezena amin'ny tambajotra. Mitovy amin'ny tcpdump (hiresaka momba azy isika any aoriana) fa miaraka amina GUI ary safidy manasokajy sy sivana maro kokoa. Atsofohy ao anaty ny karatra maivana afaka mamakafaka ny fivezivezena amin'ny tamba-jotra rehetra. Ho an'ny Windows ihany koa io.
6. netcat: fitaovana mamela ny fanokafana ny seranan-tsambo TCP / UDP amin'ny solosaina lavitra (aorian'izay dia mihaino izy), mampifandray akorandriaka amin'io seranana io ary manery ny fifandraisana UDP / TCP (ilaina amin'ny fanarahana seranan-tsambo na famindrana bitika kely eo anelanelan'ny solosaina roa).
7. Kismet: fahitana tambajotra, sniffer fonosana ary rafitra fidirana ho an'ny tambajotra tsy misy tariby 802.11.
8. hping: mpanamboatra fonosana sy mpandinika ho an'ny protokol TCP / IP. Ao amin'ireo kinova farany, azo ampiasaina ny script mifototra amin'ny fiteny Tcl ary mampiditra maotera misy tadiny (tadin-tsoratra) hilazana ny fonosana TCP / IP, amin'izany fomba izany dia mora kokoa ny mahatakatra azy ireo ary koa afaka manodina azy ireo amin'ny fomba somary mora .
9. Snort: Izy io dia NIPS: Rafitra fisorohana tambajotra ary NID: Detetection fidirana an-tserasera, afaka mamakafaka ireo tambajotra IP. Ampiasaina indrindra hamantarana ireo fanafihana toy ny buffer overflows, fidirana amin'ny seranana misokatra, fanafihana an-tranonkala sns.
10. tcpdump: debugging fitaovana izay avy amin'ny tsipika baiko. Mamela anao hahita ireo fonosana TCP / IP (sy ny hafa) izay ampitaina na voaray avy amin'ny solosaina.
11. Metasploit: ity fitaovana ity izay manome antsika fampahalalana momba ny fahalemen'ny fiarovana ary mamela antsika hanao fitsapana fidirana amin'ny rafitra lavitra. Misy koa a rafitra hanamboatra ny fitaovanao manokana ary ho an'ny Linux sy Windows. Betsaka ny fampianarana momba ny Internet izay manazava ny fomba fampiasana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Fampiharana hacking sy fiarovana 11 ambony ho an'ny Linux
Fernando Mumbach dia hoy izy:
"Tutorial Nmap" tsy misy rohy…. Kopia madio & Mametaka?
Valiny tamin'i Fernando Mumbach
Lahatsoratra tena tsara, chkrootkit sy Metasploit no tsy nahalala azy ireo. Eärendil, azonao zaraina aminay ve ireo lozisialy fiarovana fantatrao (Espaniôla, tsara kokoa).
Fidirana tena tsara, tianao.
Jereo. Ny tranonkala fiarovana tsara indrindra (ankapobeny ... tsy ho an'ny "hackers") fantatro dia Segu-info.com.ar.
tena tsara pag tsy ny fahalalana !! Tsara ..
jamekasp dia hoy izy:
Tsara !!!!… misaotra betsaka! .. izany no mahatonga ahy hanana ny tiako indrindra .. «usemoslinux»… manampy ahy foana izy ireo…. Misaotra betsaka!… ..
Fiarahabana avy amin'ny BC Mexico…
Mamaly an'i jamekasp
Misaotra anao! Famihinana!
Ny Keylogger dia ilaina ihany koa fa ho an'ny rafitra Windows na dia tsy mino ny ankamaroan'izany hacking disque izany aza olona vitsivitsy (Professionals) no manao ireo karazana zavatra ireo:
Azonao atao ny mijery eto amin'ny lahatsoratra hitako tsy ela akory izay.
yassit dia hoy izy:
Te ho hackin aho
Mamaly an'i yassit
Izahay dia mitady ireo mpijirika tsara indrindra eran'izao tontolo izao, manoratra fotsiny ho matotra sy mahay. ronaldcluwts@yahoo.com
Mamaly an'i ronald
Lahatsoratra tsara!. Hevitra, ho an'ireo te hahafantatra izay vao manomboka ... Miezaha zatra mampiasa console, amin'ny voalohany dia mety ho somary mankaleo ihany, saingy ... rehefa ela ny ela dia mandray ny tananao izy ireo ary mahatsapa koa! Fa maninona aho no miteny an'izany? Tsotra, Linux dia tsy natao ho an'ny tontolo sary (izay efa ampiasaina ankehitriny dia zavatra hafa), ary ny tontolon'ny sary indraindray dia manasarotra ny fanodikodinana ny baiko, raha avy amin'ny terminal kosa afaka milalao mangina ianao. Miarahaba ny vondrom-piarahamonina Linux iray manontolo avy any Arzantina, ary ny EH rehetra an'ny fiarahamonina 🙂
Fa maninona no tcpdump raha Wireshark?
Skype 2.2 beta azo alaina!
Gnome 3 dia efa eo amintsika!